Lucidchart: Miara-miasa ary alaivo sary an-tsaina ny Wireframes, Gantt Charts, ny fizotran'ny varotra, ny automatique ara-barotra, ary ny dian'ny mpanjifa | Martech Zone
Ny fijerena sary dia tsy maintsy atao rehefa miresaka amin'ny antsipiriany dingana sarotra. Na tetik'asa misy tabilao Gantt mba hanomezana topimaso ny dingana tsirairay amin'ny fametrahana teknolojia, automation ara-barotra izay manondraka ny fifandraisana manokana amin'ny mpanjifa na mpanjifa, fomba fivarotana mba hijerena ny fifandraisana mahazatra amin'ny fizotran'ny varotra, na dia kisary fotsiny aza. alaivo sary an-tsaina ny dian'ny mpanjifanao… ny fahafahana mijery, mizara ary miara-miasa amin'ny dingana dia dingana lehibe amin'ny fizotry ny hevitra sy ny fampiharana.
Nandritra ny taona maro, dia natao tamin'ny rindrambaiko desktop matanjaka toa an'i Visio, na natao fotsiny tamin'ny fitaovana famelabelarana toa an'i Powerpoint. Na izany aza, ny rindrambaiko desktop dia tsy manome fitaovana ho an'ny ekipa lavitra, loharano ary mpanjifa. Ampidiro Lucidchart, fampiharana kisary mifototra amin'ny rahona izay mampivondrona ny ekipa handray fanapahan-kevitra tsara kokoa sy hanorina ho an'ny ho avy.
Lucidchart dia sehatra fiasana hita maso izay manambatra ny kisary, ny fijerena angon-drakitra, ary ny fiaraha-miasa mba hanafainganana ny fahatakarana sy hitondrana ny fanavaozana. Amin'ny alalan'ity vahaolana mifototra amin'ny rahona intuitive ity, na iza na iza dia afaka mianatra miasa amin'ny maso sy miara-miasa amin'ny fotoana tena izy eo am-pananganana tabilao, fanesoana, kisary UML, sy ny maro hafa.
miaraka Lucidchart, ny olon-tsotra sy ny ekipa dia afaka manao sarintany mora foana ny kisary miaraka amin'ny maodely dingana mahazatra. Ny tombony amin'ny sehatra dia ahitana:
Mamorona vina iombonana – Alaivo sary an-tsaina haingana ny fizotran'ny ekipanao, ny rafitra ary ny rafi-pandaminana. Ny kisary marani-tsaina dia mamela anao haka sary an-tsaina ireo hevitra be pitsiny haingana kokoa, mazava kokoa ary miara-miasa kokoa.
Ampifanaraho amin'ny pejy iray ny rehetra - Ny fiteny hita maso mahazatra dia manafaingana ny fiaraha-miasa ary manatsara ny fifandraisana. Ny fitaovana dia miaraka amin'ny dikan-teny, fanehoan-kevitra manokana amin'ny endriny, amin'ny chat in-editor, fiaraha-manoratra amin'ny fotoana tena izy, cursors miara-miasa ary fampahafantarana.
Ataovy fiainana ny drafitra - Lucidchart mamela anao hifantoka sy handroso haingana miaraka amin'ny tanjona. Ataovy fiainana ireo drafitra izay hanohana ny orinasanao.
Ny sehatra dia fitahirizana antontan-taratasy vonona amin'ny orinasa izay mitambatra amin'ny Google workspace, Microsoft, Atlassian, Slack, sy ny maro hafa.
Ny fampiharana dia tena matanjaka ka hampiasaiko ho an'ny wireframing ihany koa. Izy ireo koa dia manolotra ny fahafahana manampy tabilao fandaminana, iPhone mockups, UML diagrams, network diagrams, sarintany saina, site sarintany, Venn diagrams, sy ny maro hafa.
Lucidchart dia manampy antsika hamaha olana saro-pady amin'ny alàlan'ny famoronana diagrama ara-javakanto sy sariitatra mikoriana izay mamorona mazava ary manampy ny ekipanay mizara haingana haingana amin'ny codebase sy ny rafitra. … Mamela mpikambana maro ao amin'ny ekipa hiara-hiasa amin'ny fotoana iray izy io, ka mahatonga azy ho mora ny miasa amin'ny ekipa iray voazara tanteraka.
Tsotra ny fanombohana ary misy loharanon-karena marobe ao amin'ny fantsona YouTube-ny ​​raha te-hanomboka amin'ny fampiasana ny sehatra ianao. Ny sehatra ihany koa dia manana fampiharana finday sy takelaka amin'ny iOS sy Android.
Misoratra anarana maimaim-poana!
Fampahalalana: mpiara-miasa amin'i lucidchart ary mampiasa an'io rohy io aho amin'ity lahatsoratra ity miaraka amin'ireo rohy mifandray hafa.
Tags: fiaraha-miasaMpanjanantanykisary mikorianatabilao mikorianatabilao ganttlucidchartfizotry ny sarintanyautomation marketingfanesoanafikorianan'ny dinganafanaovana sari-tanyfizotry ny varotrafiaraha-miasa amin'ny ekipaVidin'ny UMLtoeram-piasana hita masotoerana fiasan'ny masotariby